ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်နေရာတွေသွားဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ? - For her Myanmar
ဘယ်သွားရမလဲ ခေါင်းစားနေနေစရာမလိုအောင် ပွဲလေးတွေ စုပေးထားပါတယ်နော်
ယောင်းတို့ရေ … တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် ဘယ်နေရာသွားလို့ သွားရမှန်းမသိတာကလည်း ခေါင်းခဲစရာတစ်ခုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ချိန်းလိုက်တိုင်း တစ်ခါလာလည်း ဒီနေရာ နောက်ခါလာလည်း ဒီနေရာဖြစ်နေတော့ ဘယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတော့မလဲ … ဒီတော့ ယောင်းတို့မပျင်းစေရအောင် For Her Myanmar က အပတ်စဉ် သွားစရာလာစရာပွဲလေးတွေကို မထပ်ရအောင် တင်ဆက်ပေးနေတယ်နော်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒီလိုပျော်စရာပွဲလေးတွေ ရှိနေပါတယ် ယောင်းရေ …
Doggies’ Day at the Zay!
နေ့ရက် – မေလ (၁၁) ရက် နှင့် (၁၂) ရက်
အချိန် – နေ့လယ် (၁၂) နာရီမှ ည (၈) နာရီထိ
နေရာ – The Tea Factory၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီး။
ခွေးချစ်သူယောင်းလေးတွေအတွက် ပျော်စရာပွဲလေးတစ်ခု ရန်ကုန်ဈေးက စီစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ခါတိုင်းလို အစားသောက်နဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပေးမယ့်အပြင် ယောင်းတို့ရဲ့ ချစ်စရာအိမ်မွေးခွေးလေးတွေနဲ့အတူ ဆင်နွှဲနိုင်မယ့် ဖက်ရှင်ရှိုးအစီအစဉ်တွေလည်း ပါဦးမှာတဲ့။ သိကြတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်ဈေးဆိုတာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အလှဆုံးနေရာတစ်နေရာဖြစ်လို့ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့ဦး။ ဝင်ကြေးကတော့ ၆၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး အသက် (၁၂) အောက် ကလေးတွေအတွက်တော့ ဝင်ကြေးအခမဲ့ပါနော်။
Related article >>> ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆိုတဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ကို ရှာတွေ့ပြီလား?
Hanguk Night Market
နေ့ရက် – မေလ (၁၀) ရက် မှ (၁၂) ရက်
အချိန် – ညနေ (၃) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နေရာ – ကန်တော်ကြီး၊ မျှော်စင်ကျွန်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Korea Night Market ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားတစ်လိုင်းယောင်းယောင်းတွေအတွက် ကိုရီးယားရိုးရာအစားအစာတွေ၊ အလှကြိုက်တဲ့ယောင်းယောင်းတွေအတွက် ကိုရီးယားအလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးသွားမယ့်အပြင် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေ၊ ဂိမ်းကစားပွဲတွေနဲ့ အကပြိုင်ပွဲတွေလည်း ပါဦးမှာဆိုတော့ ဒီကိုမှ မသွားရင် ဘယ်ကိုသွားမလဲ ?
Related article >>> မိုးရာသီမှာ ဖက်ရှင်မဂွမ်းစေရအောင် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖိနပ် (၄) ရံ
နေ့ရက် – မေလ (၁၂) ရက်
အချိန် – နေ့လယ် (၁၂) နာရီမှ (၃) နာရီထိ
နေရာ – Novotel Yangon Max
“အမေများနေ့” အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Novotel ရဲ့ The Square Restaurant မှာ ယောင်းမေမေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းလိုက်ရအောင်။ မိသားစုတွေတူတူလာစားရင် မေမေတွေက အခမဲ့သုံးဆောင်ရမှာတဲ့။ အစားအသောက်တွေကတော့ Novotel လို ဟိုတယ်ကြီးကဆိုတော့ ပြောစရာကို မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်နော်။
Related article >>> ယောင်းတို့မမေအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသင့်တဲ့ skincare ပစ္စည်း (၄) မျိုး
ဒီလောက်ဆို ယောင်းတို့လည်း ပိတ်ရက်မှာ သွားဖို့လာဖို့ နေရာကောင်းကောင်းလေးတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရသွားလောက်ပြီပေါ့နော်။ ဒါဆို နောက်တစ်ပတ်မှ ပွဲအသစ်လေးတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ကြစို့ …
ဘယျသှားရမလဲ ခေါငျးစားနနေစေရာမလိုအောငျ ပှဲလေးတှေ စုပေးထားပါတယျနျော
ယောငျးတို့ရေ … တဈပတျနဲ့တဈပတျ ဘယျနရောသှားလို့ သှားရမှနျးမသိတာကလညျး ခေါငျးခဲစရာတဈခုပါပဲ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဖေို့ဖွဈဖွဈ၊ ခဈြသူနဲ့ ဒိတျဖို့ဖွဈဖွဈ ခြိနျးလိုကျတိုငျး တဈခါလာလညျး ဒီနရော နောကျခါလာလညျး ဒီနရောဖွဈနတေော့ ဘယျစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတော့မလဲ … ဒီတော့ ယောငျးတို့မပငျြးစရေအောငျ For Her Myanmar က အပတျစဉျ သှားစရာလာစရာပှဲလေးတှကေို မထပျရအောငျ တငျဆကျပေးနတေယျနျော။ ဒီတဈပတျမှာတော့ ဒီလိုပြျောစရာပှဲလေးတှေ ရှိနပေါတယျ ယောငျးရေ …
နရေ့ကျ – မလေ (၁၁) ရကျ နှငျ့ (၁၂) ရကျ
အခြိနျ – နလေ့ယျ (၁၂) နာရီမှ ည (၈) နာရီထိ
နရော – The Tea Factory၊ ကနျရိပျသာလမျး၊ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးမကွီး။
ခှေးခဈြသူယောငျးလေးတှအေတှကျ ပြျောစရာပှဲလေးတဈခု ရနျကုနျဈေးက စီစဉျပေးလိုကျပါပွီ။ ခါတိုငျးလို အစားသောကျနဲ့ လူသုံးကုနျပစ်စညျးတှေ ရောငျးခပြေးမယျ့အပွငျ ယောငျးတို့ရဲ့ ခဈြစရာအိမျမှေးခှေးလေးတှနေဲ့အတူ ဆငျနှဲနိုငျမယျ့ ဖကျရှငျရှိုးအစီအစဉျတှလေညျး ပါဦးမှာတဲ့။ သိကွတဲ့အတိုငျး ရနျကုနျဈေးဆိုတာ ဓာတျပုံရိုကျဖို့ အလှဆုံးနရောတဈနရောဖွဈလို့ ဓာတျဖမျးခဲ့ဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့ဦး။ ဝငျကွေးကတော့ ၆၀၀၀ ကပျြဖွဈပွီး အသကျ (၁၂) အောကျ ကလေးတှအေတှကျတော့ ဝငျကွေးအခမဲ့ပါနျော။
Related article >>> ကိုယျနဲ့အသငျ့တျောဆုံးဆိုတဲ့ လကျကိုငျအိတျကို ရှာတှပွေီ့လား?
နရေ့ကျ – မလေ (၁၀) ရကျ မှ (၁၂) ရကျ
အခြိနျ – ညနေ (၃) နာရီမှ ည (၁၀) နာရီထိ
နရော – ကနျတျောကွီး၊ မြှျောစငျကြှနျး
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Korea Night Market ကို ပထမဆုံးအနနေဲ့ မြှျောစငျကြှနျးမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အစားတဈလိုငျးယောငျးယောငျးတှအေတှကျ ကိုရီးယားရိုးရာအစားအစာတှေ၊ အလှကွိုကျတဲ့ယောငျးယောငျးတှအေတှကျ ကိုရီးယားအလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ရောငျးခပြေးသှားမယျ့အပွငျ ဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျတှေ၊ ဂိမျးကစားပှဲတှနေဲ့ အကပွိုငျပှဲတှလေညျး ပါဦးမှာဆိုတော့ ဒီကိုမှ မသှားရငျ ဘယျကိုသှားမလဲ ?
Related article >>> မိုးရာသီမှာ ဖကျရှငျမဂှမျးစရေအောငျ ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ ဖိနပျ (၄) ရံ
နရေ့ကျ – မလေ (၁၂) ရကျ
အခြိနျ – နလေ့ယျ (၁၂) နာရီမှ (၃) နာရီထိ
နရော – Novotel Yangon Max
“အမမြေားနေ့” အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ Novotel ရဲ့ The Square Restaurant မှာ ယောငျးမမေနေဲ့အတူ ဖွတျသနျးလိုကျရအောငျ။ မိသားစုတှတေူတူလာစားရငျ မမေတှေကေ အခမဲ့သုံးဆောငျရမှာတဲ့။ အစားအသောကျတှကေတော့ Novotel လို ဟိုတယျကွီးကဆိုတော့ ပွောစရာကို မလိုတော့ဘူး ထငျပါတယျနျော။
Related article >>> ယောငျးတို့မမအေတှကျ လကျဆောငျဝယျပေးသငျ့တဲ့ skincare ပစ်စညျး (၄) မြိုး
ဒီလောကျဆို ယောငျးတို့လညျး ပိတျရကျမှာ သှားဖို့လာဖို့ နရောကောငျးကောငျးလေးတှေ တဈပုံတဈပငျရသှားလောကျပွီပေါ့နျော။ ဒါဆို နောကျတဈပတျမှ ပှဲအသဈလေးတှနေဲ့ ပွနျတှကွေ့စို့ …
Tags: #weekend, Event, Fun, hangout
အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုး ပေးသင့်လဲ?
မျက်ခုံးတက်တူးမထိုးခင်နဲ့ ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေ ဂရုစိုက်သင့်လဲ?
Stella May 8, 2019